ဆန်နှင့်ဆန်ကွဲ ပြည်ပတင်ပို့သည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ(၃/၂၀၂၀)... သွင်းကုန်လိုင်စင် (၁) စောင်လျှင် ကျပ် ၃၀၀၀၀ (ကျပ်သုံးသောင်း)နှုန်းဖြင့် ပြောင်းလဲကောက်ခံသွားမည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ... သွင်းကုန်လိုင်စင် (၁) စောင်လျှင် ကျပ် ၃၀၀၀၀ (ကျပ်သုံးသောင်း)နှုန်းဖြင့် ပြောင်းလဲကောက်ခံသွားမည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ... GALAXY S20 စမတ်ဖုန်းများနိုင်ငံ ၂၀ တွင် SAMSUNG ရောင်းချ... ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကြောင့် အာရှပစိဖိတ်စီးပွားရေးများ အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ ၂၀ဝ ကျော်ထိခိုက်နိုင်... IBK ဘဏ်အကြီးအကဲအသစ် ဘဏ်၏ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ကတိသစ္စာပြုခဲ့... စားသုံးကုန်ဈေးနှုန်းအညွှန်းကိန်း ရှစ်နှစ်တာ ကာလအတွင်းအမြင့်ဆုံးသို့ ရောက်ရှိ... ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစည်းအဝေးကျင်းပ... ယခုတစ်ပတ် ဆန်နှင့်ဆန်ကွဲတင်ပို့မှု ယခင်တစ်ပတ်ထက် ပိုမိုတင်ပို့နိုင်... အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ ၂၀၂၀-၂၀၂၅ မှတစ်ဆင့် မွန်ပြည်နယ်၏ စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းများ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည့် REGIONAL CONSULTATION ကျင်းပ...
Page: ../ 12345 ... 17
online regestration အဘယ်‌‌ေကြောင့်လုပ်လို့မရပါလဲ?
Answer : ေလာေလာဆယ္မရေသးတာပါ. June , July ေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ရပါပီရွင့္
Registration Expired ျဖစ္သားလို႔ ဘယ္ကို ဆက္သြြယ္ရမလဲ။ Expired ကို ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ
Date : 05 Mar, 2020
Answer : Registration Expired ျဖစ္ရင္ ပို့ကုန္သြင္းကုန္ရံုး(ရန္ကုန္)မွာလာေရာက္ေလ်ာက္ထားနိုင္ပါတယ္။ Registration Card မွာ သက္တမ္းကုန္မဲ့ရက္စြဲကိုေဖာ္ျပထားပါတယ္
လက်ခစားစနစ်နဲ့ လုပ်ဖို့ ပြည်ပက ကုန်ကြမ်းသွင်း ကုန်ချောပြန်ပို့ လုပ်ငန်းမျိုးအတွက် လိုင်စင်ဘယ်လိုလျောက်ရလဲ သိချင်ပါတယ် အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းပုံစံမျိုးပါ အထည်ချုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး ဖန်စီ ကြယ်သီးလုံးလေးတွေလုပ်တာပါ ဘာအထောက်ထားတွေလိုမလဲ လည်းသိချင်ပါတယ်
Answer : 01245855 သြင္းကုန္ဌာနကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္ူးနိုင္ပါတယ္
semi Online ဝင်တာ Invalid ထသကပေါ်နေတာဘာကြာင့်လဲ
Answer : ထသက ၉ လံုးရိုက္ထည့္ေပးရမွာပါ။ အဆင္မေျပတာရွိရင္ 01371219 ကိုဆက္ေပးပါရွင့္
Import License က သက်တမ်း တိုးခွင့်ပြုလိုက်ပြီ‌‌ေပြာလို့့ သိပါရစေ/
Answer : Import License အား သက္တမ္းတိုးျခင္းအတြက္ ပထမအျကိမ္သက္တမ္းတိုး(၂)လ နွင့္ ဒုတိယအျကိမ္သက္တမ္းတိုး (၁)လ ျဖင့္ ယခင္ကတည္းကပင္ ခြင့္ျပဳထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။
FDAသက္တမ္းအနည္းဆံုးတလရှိပါက import license ကို သံုးလ ေပးမယ္ အမိန္႔စာထုတ္ထားပါတယ္ရှင့်
တကယ်လို့ FDA သက္တမ္းက ဥပမာ ၁၀ရက္တို႔ ၁၁ရက္တို႔ ကျန္ရှိပါက import license ကို အရင္ကအတိုင္းဘဲ
FDA သက္တမ္း အတိုင္း license ေလျှာက်လို့ ရပါသလားရှင်​ြ
Answer : FDA သက္တမ္း 1လရွိလ်ွင္ လိုင္စင္သက္တမ္း အျပည့္ရနိုင္ျပီး FDA သက္တမ္း(1)လေအာက္ဆိုလ်ွင္ FDA သက္တမ္းအတိုင္းသာေပးပါသည္ ၀န္ခံကတိေလ်ွာက္လြာလိုအပ္ပါသည္ဟု သြင္းကုန္မွျပန္လည္ေျဖၾကားေပးပါတယ္
သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလ်ာက္ခ်င္လို့ပါ FDA ေထာက္ခံခ်က္ရျပီးပါျပီ စာရြက္စာတမ္းဘာလိုအပ္ပါသလဲ
Answer : သြြင္းကုန္ဌာန၏ ဖုန္းနံပါတ္ 01-245855 သို့ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္ရွင္။
Re export လုပ်ဖို့ လိုင်စင် လို မလို သိချင်ပါတယ်
Answer : ဖုန္းနံပါတ္ 01-245855 သို့ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္ရွင္။
united states ဆိုရင္ GSP ဘာ Form ေလွ်ာက္လို႕ရလဲ ရွင့္
Answer : ဖုန္းနံပါတ္ 01-376057 သို့ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္ရွင္။
Answer : https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_home.jsp?Lang=en www.commerce.gov.mm Office Building No.3, MOC , Nay Pyi Taw. ph : 067-408233 fax : 067-408321 No.228-240 , Strand Road, Yangon. ph : 01-377600 e-mail : roo.myanmar2014@gmail.com